सर्वोच्च अदालतले रोक्ला ट्रम्पले लगाएको संकटकाल ? | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय सर्वोच्च अदालतले रोक्ला ट्रम्पले लगाएको संकटकाल ?
on: February 16, 2019 अन्तरराष्ट्रिय, मुख्य खबर
सर्वोच्च अदालतले रोक्ला ट्रम्पले लगाएको संकटकाल ?
फागुन ४, वाशिंगटन डिसी (अमेरिका) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिको सीमामा पर्खाल बनाउने चाहिने रकम नपाएपछि राष्ट्रिय संकटकालको घोषणा गरेका छन् । संकटकालको घोषणा गरेपछि कानूनी चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्छ भन्नेमा उनी सचेत भने थिए । संकटकाल लगाएपछि प्रशासनमाथि मुद्दा दायर हुनेछ भनेर शुक्रवार नै उनले बताएका पनि थिए ।
मुस्लिम बाहुल्य देशका नागरिकहरुको अमेरिका यात्रामाथि प्रतिबन्ध, गैरकानूनी रुपमा छिरेका बालबालिकालाई अमेरिका मै राख्ने ओबामा प्रशासनको निर्णय उल्ट्याउने लगायत ट्रम्पले गरेका कयौं निर्णयहरु यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । यस्तोमा पछिल्लो घोषणाले पनि कानूनी झमेला बेहोर्ने उनको अनुमान गलत छैन । अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन लगायत केही समूहले संकटकाल विरुद्ध मुद्दा हाल्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । तर यी कानूनी चुनौतीहरु कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने चाँहि अस्पष्ट छ ।
राष्ट्रिय संकटकाल ऐन जारी भएपछिको ४३ वर्षिय इतिहासमा यस्तो भएको थिएन । सो ऐन आउनुभन्दा अघि भने राष्ट्रपति हेरी ट्रूम्यानले गरेको राष्ट्रिय संकटकाल घोषणालाई सर्वोच्च अदालतले रोक्का गरिदिएको थियो । अदालतले संकटकाल रोकेन भने यो एक वर्षसम्म चल्नेछ र त्यसपछि यो आफैं समाप्त हुनेछ । यस बीचमा हरेक ६ महीनामा कंग्रेसले संकलकाल अन्त्य गर्ने विषयमा संयुक्त प्रस्ताव भने पेश गर्न सक्नेछ । एजेन्सी